Idealism kaRabhi Moshe Rat
Iimpendulo > Udidi: Ifilosofi > Idealism kaRabhi Moshe Rat
Kobe Ubuzwe kwiinyanga ezi-7 ezidlulileyo
Bendifuna ukubuza ukuba ucinga ntoni malunga nendlela yokucinga exhaswa nguMoshe Rat,
Imbono yehlabathi enembono enqwenelekayo ayibonisayo, ixoxa ngokubanzi ukuba yonke into eyinyani yingqondo, imveliso yengqiqo yomntu, ephuma ngokwazo kulwazi oluphezulu lukaThixo.
Ngamanye amazwi, inyaniso luhlobo lwephupha olukhoyo kwingqondo yomntu, inyaniso kuphela iphupha elikwabelwana ngalo ngabo bonke abantu, kwaye kungekhona eyakho.
1. Oku kusekelwe, phakathi kwezinye izinto, kwizifundo ezivela kwi-quantum (mhlawumbi ehambelana nomphumo wokuqwalaselwa kwimilinganiselo, njl.).
2. Kwaye njengeengcali zefiziksi ezivakalisa ukuba iinzame zokumisela ubukho bokwenene bezinto aziphumelelanga zonke, kwaye ukuba kunjalo ekuphela kwenyani ekhoyo kukwazi. Ngengqondo.
Kwakhona, kwiimeko apho umsebenzi wengqondo wehla kwaye ukhubazekile - abantu bafumana amava okuqonda abanzi ngakumbi kunemeko eqhelekileyo.
Umzekelo kwiimeko zokuphantse ukufa okanye phantsi kweempembelelo zamachiza athile. Kwaye ngaloo ndlela isondela kwimeko ye-superconscious yokuqala. ~ / Umanyano olunye. Kunye nokuninzi.
4. Ngaphezu koko, ngenxa yokuba kukho izizathu ezininzi zale ndlela, kwaye ilula kwakhona uthi kufuneka ithenjwe.
5. Kwaye imbono yehlabathi yokwenene ayinangqondo. Ke endaweni yokubambelela kumbono wehlabathi wamaxesha aphakathi, umntu unokuguqukela ekuphuhliseni umbono.
(Ndicinga ukuba uneengxabano ezininzi ngakumbi kodwa ngokwenene azibekwanga kuzo zonke).
Ngokusekelwe kwezi ndlela, sele kukho abo bakha zonke iintlobo zeemodeli zokuchaza inyaniso.
Masithi ingqondo, ngokwendlela yeCastrop, ngokulula "indlela ukuqonda kwethu kujongeka ngayo kumbukeli wangaphandle." Ingqondo kunye nokuqonda azikho izinto ezimbini ezahlukeneyo, kodwa ingqondo yimbonakalo ebonakalayo kunye neyokubonakaliswa kwengqondo.
Iithegi zombuzo: Idealism, UMoses Rat, I-Castrop
mikyab Abasebenzi Uphendulwe kwiinyanga ezisibhozo ezidlulileyo
URabbi Moshe Rat ngumfundi wangaphambili kwaye ndiyambulela ngokuqinisekileyo. Andabelani ngeembono zakhe ezininzi kwaye ngakumbi utyekelo lwakhe kwintelekelelo kunye neminqweno. Iingxoxo ozibhale apha egameni lakhe (andazi iinkcukacha. Andizange ndifunde) zibonakala zingenasiseko ngokupheleleyo, kubandakanywa nesiseko sabo sesayensi.
Ibango lokuba inyaniso liphupha elikhoyo kwingqondo yomntu libonakala liphikisana ngokwenene kum. Ulwazi lwam lomntu Ngubani? Eyam? I mean ndikhona? Ndim kuphela okhoyo? Kutheni ucinga ukuba ndim kuphela okhoyo kwaye bonke abanye abekho? Kwaye yonke into eyinyani ayikwenzi? Kwaye uThixo ukhona? Wazi njani?
Kwaye malunga nesiseko "senzululwazi", andizange ndiqonde ukuba yintoni uxhulumaniso lwe-quantum. Isiphumo sokulinganisa kwinyani ngumbuzo onzima, kodwa izimvo zahlulahlulwe ngayo, kwaye kucacile namhlanje ukuba "umlinganiselo" awufuni ukuqonda komntu (nokuba umlinganiselo ngekhompyutha uphazamisa umsebenzi wamaza), ngokuchasene noko kwamkelweyo. kuncwadi oludumileyo. Kwaye kumnandi.
Kobe Uphendulwe kwiinyanga ezili-7 ezidlulileyo
Andisekho kuwo onke amabango akhe, koko ndidlule kuko ngokufutshane malunga nawo.Unamabango ambalwa ngakumbi kwiwebhusayithi yakhe Ebalisayo.
Ngokuqinisekileyo ucinga ukuba abanye abantu bakhona. Kodwa njengokuba ephupheni nabani na unokuphupha ngolu hlobo kwihlabathi lethu i-consciousness iphupha kunye kwindawo eyaziwayo. Kubonakala kum ukuba umzekelo wohlobo lomdlalo wekhompyutha unokubonisa amazwi akhe ngendlela efanelekileyo. Ndikwatyekele ekucingeni ukuba yeyona ndlela yokujonga izinto eziyinyani kwaye yindlela ehambelanayo.
Yintoni enzima kum ngalo mbandela, ucinga ukuba ufanele uwuxoxe njani lo mbandela? Okanye kwimibandela enjalo?
Njani kanye kanye anokuziswa apha okanye phaya? Kwaye ucinge ngezigqibo kwaye wenze isigqibo.
Emva koko, kucacile kuwo wonke umntu ukuba ngokutsho kukaKant akukho bungqina bokuba khona kwendalo yonke kunye nento ngokwayo (iNuumana). Kodwa sihlala sidibana kuphela nesenzeko (ngaphandle kobukho bethu kanye)… Kodwa ke kutheni izinto ezimbini kwaye ungacingi ukuba yinto esebenzayo kuphela? (Njengentlobo yencakuba ye-Oakham ukuba ilapha kwaphela)
Ndibonile ukuba umbuzo wakho usuka kwithambeka elimtyibilizi malunga nokuthandabuza ngokubanzi kunyukile, kwaye mhlawumbi negumbi;).
Kodwa, akucaci ukuba ifanele ukuba ize apha kuba ayisiyondlela yokuthandabuza, kodwa kukutolikwa kwemetaphysical yenyani.
Mhlawumbi ndiza kubuza okwahlukileyo, kutheni u-rabhi ecinga ukuba umbini kwaye abanye abantu bakhona kwaye u-G d ukho?
Ndicinga ukuba yindlela "ebonakala" ngayo kuye. Kwaye akukho sizathu sakuthandabuza kwaye ngokubanzi ukuqonda kunye neemvakalelo zakhe akukho? Kodwa umbono wento enika ingcaciso epheleleyo yezi zinto ayifuni kuthandabuza kuba ibonakala ngathi yindlela yokutolika * / enye indlela. Okanye akubonakali kuwe ukuba eli libango elichanekileyo (kuba ekugqibeleni liphikisana neengcinga zokuba kukho itafile phambi kwethu)?
Ndikwacinge ukuba inokuba ziiBohrs ozikhankanye kuluhlu lwama-383 kwanzima kakhulu ukuzisebenzisa le ngcaciso, kuba lulwimi olungenazibizo (ngaphandle kwezabanye abantu) kodwa lunezenzi noguqulo lwazo. Kodwa kwelinye icala, kubonakala ngathi nakumdlalo wekhompyuter siphatha izinto njengento ekhoyo. Kwaye ukuba kunjalo kwakhona ukulungelelaniswa kubonakala kuhambelana kwaye kuhambelana.
Umlamli wokugqibela Uphendulwe kwiinyanga ezili-7 ezidlulileyo
Ngoko ke, endaweni yokumbombozela, wayedla ngokunyathela phezu kophahla oluphakamileyo, aziwise phantsi afe aze avuke ephupheni. Okanye uya kukhathalela ukurhoxisa umxhuzulane kwiphupha lakhe kwaye asivulele iimoto zokuphupha ezidada emoyeni.
mikyab Abasebenzi	Uphendulwe kwiinyanga ezili-7 ezidlulileyo
Awuwaqondi la magama, kwaye ngokuqinisekileyo awazi ukuba ungaxoxa njani (okanye ubone nayiphi na ingongoma ekwenzeni oko).
Uxolo ngokulibazisa bendixakeke kakhulu bendifuna ukuhlomla.
Andizange ndiqonde inani lamanqaku kulo mgca.
1. Okokuqala malunga nokungaqondwa kakuhle kwamagama.
Ngaba uRabhi uyayiqonda ingcamango yokuba ngenxa yokuba konke esikwaziyo "yimbono" yethu kuphela, kungekhona into ngokwayo. Ngoko kunokuthiwa ngokwenene yonke into ekhoyo ngaphandle kwabanye abantu, kuphela kwimbono "yethu". Kwaye akukho mfuneko yokongeza kwi-hypothesis yobukho bento nganye. ~ Njengephupha. Kuphela apha ukuba iphupha ekwabelwana ngalo.
2. Ke ngoku sineendlela ezimbini zokuchaza ubunyani.
A. Ndibona itafile kwaye ngokwenene kukho "izinto ezinjalo" ngaphandle kum.
B. Ndibona itafile, kodwa eneneni ikwingqondo yam kuphela hayi ngaphandle. Udityaniswe apho yinto elungelelanisa oku masithi Gd. Kwaye umnxibelelanisi ukuze abantu abaninzi babone. Uhlobo lomdlalo wemfazwe wentsebenziswano kwikhompyuter.
Ukuba kunjalo, inokukhethwa njani ingcaciso “elungileyo”?
Ngapha koko, kuya kuba ngokweetuities ezithile ezithi ku-A. ilizwe elinjalo likho. Kwaye B. ukuba asizange sihlangane neli hlabathi ngokwe-se kodwa sihlala sidibana nalo ngokubona.
Kubonakala kunengqiqo ukukhetha ingcaciso elula ukuba ichaza idatha efanayo kwaye ukuba kunjalo kufanelekile ukukhetha i-B. Kodwa akucaci kum ukuba oku kuchanekile kuphela kule meko. Kwaye uninzi lwemethodological. Kodwa apha abantu abaninzi bacinga njengo-A.
Kwaye ukuba kunjalo, ndiyabuza ukuba kufanelekile kwaye kufanelekile kangakanani ukuxoxa ngalo mbandela.
Ngokuchasene noko, ukuba urabhi akayazi indlela yokuxoxa ngayo, kutheni ke ecinga ukuba uRabhi uMoses akalunganga kwaye unyanisile??
3. Kutheni ungaboni njongo kule ngxoxo? Ngaba kungenxa yokungakwazi ukuxoxa ngayo (kwaye ukuba kunjalo, ngoko umntu unokuthetha njani "ngempazamo" yale ndlela). Okanye ngenxa yokuba akukho NFKM (kodwa nokuba ayichanekanga, kuninzi kwinqanaba elikhoyo kunye nefilosofi, njengoko abaxhasi bale ndlela babanga)
4. Ngokwenyama, kunokwenzeka ukuzisa zonke iintlobo zobungqina njengoko izinto eziphambili ziyimihlaba ngokwenene, kwaye ziziphatha ngendlela engaqhelekanga (ezifana nesantya sokukhanya, kunye nesantya esingenasiphelo, ukugcinwa kwentlawulo ebonisa imithetho yangaphandle kwindalo, njl.). Kwaye azikho njengezinto zokwenyani kodwa kuphela "njengamandla" okanye intsimi. Kwaye kunjalo zineziphumo ngokwenyani. Ndicinga ukuba kukho abo bafumana uThixo kule nto. Okwenza amasimi okanye imithetho yendalo ngokwe-se.
Kuphela apha thatha inyathelo elinye ukuya phambili njengenxalenye yengqondo ekwabelwana ngayo.
Uxolele ukulibaziseka, kodwa kunzima ukuxoxa, ngakumbi njengoko uphinda izinto endizichazile. Ndiza kuphendula ngokufutshane.
1. Ndachaza ukuba andiwaqondi amagama. Ukuba akukho nto ikhoyo nam andinayo. Khona ubukho bam bukwintelekelelo kabani? Eyam? Ukuba uthi ndikhona kwaye zonke ezinye azikho, uzuze ntoni? Ukuba sele ucingela ukuba kukho into ekhoyo akukho sizathu sokuba ungabongezi ukuba ezinye izinto zikhona. Emva kwayo yonke loo nto, le yi-intuition yethu.
2. Ingcaciso echanekileyo yinto ebonakala ngathi inengqondo kum.
3. Ngokwenene, ayinakuxoxwa. Oku akuthethi ukuba akukho nyaniso apha. Le ngcamango ayiyonyani ngokoluvo lwam, kwaye ayinakuxoxwa. Ngoko ke umthetho we-causality ngokombono wam kwaye kusenzima ukuxoxa ngayo okanye ukubonisa ubungqina kwabo bangayamkeliyo.
4. Akukho nto yakwenza nefiziksi. I-Physics ayitsho ukuba izinto azikho, kodwa ukuba aziyiyo le nto sicinga ukuba ziyiyo (kwaye ayichanekanga).
Le mibuzo ayinamdla kakhulu kwaye andiboni nto kule ngxoxo.
ICannabis Uphendulwe kwiinyanga ezili-7 ezidlulileyo
1. Oku akuyonyani ngokupheleleyo kuba ewe uyavuma ukuba abanye abantu bakhona, kwaye impazamo kuphela ekutolikeni kwethu injongo yobukho bezinto zangaphandle ezingezizo iingqondo.
2. Ndiyaqonda, kuphela eli gama lakhelwe kumabango ongezelelweyo kwaye ukuba kunjalo kuphuculwe ukuqaliswa kokuqala. Njengohlobo lobungqina bentanda-bulumko kunye nokubhenca ku-Gd.
3. Xoxa ukuba uthetha ukukwazi ukwenza izigqibo kwaye ukhangele ukuba kukho imfezeko kunye nokuhambelana kokungazi? Kodwa ukuba kunjalo, ucinga ntoni malunga nebango lakho ukuba ngokwenene ubona umdla kwi-rhetoric. Kwaye kwiingxoxo ngokubanzi...
4. Kulungile, esi sihloko esinomdla esiza kakhulu kwiincwadi ezidumileyo kwaye apha kule ndawo iphinda ivele ngamaxesha ngamaxesha, isetyenziswe ngabantu benkolo kwelinye icala, kunye neengcamango kwelinye icala, kodwa. INarali idinga ukwandiswa kumbuzo ngokwayo.
1. Ngokusekelwe kwinto oyibangayo ukuba kukho abanye abantu? Kwaye malunga nabo unolwazi oluthe ngqo, ngokuchasene nobukho benjongo yeetafile?
3. Ndicacisile kwiindawo ezininzi ukuba i-rhetoric ingaba yintoni na. Lawa ngamabango ukuba akukho ndlela yokuhlola, kuba nabani na oqinisayo uya kugatya nayiphi na ingxabano ngendlela efanayo (mhlawumbi le yinkohliso yam nje). Ke ngoko andiboni nto kule ngxoxo.
1. Ndicinga ukuba kunokuxoxwa kakhulu ngokusekelwe kwi-intuition. Kodwa ukuba kunjalo, yitsho ukuba itheyibhile ekhoyo ngokwenene injalo.
Ngoko fumana. Ngaba ubona into engcono?
2-3. Enkosi. ngoku ndiyayifumana.
4. Njengoko bendikhankanyile malunga nobudlelwane phakathi kwesayensi yanamhlanje kunye nesayensi kunye nefilosofi kunye nezakwalizwi, ndingathanda ukubuza, qha ndingathanda ukuwela ithontsi kulo mbandela kuqala. Kuba ixhaphake kakhulu kuncwadi nakuncwadi oludumileyo. Ngelixa iingxelo zakho apha zimangalisa (ifiziksi yanamhlanje inokude ibonise ukuba izinto esizibonayo zinjalo ngokwenene). Ukuba andizange ndiyikhuphe ngokupheleleyo injongo yakho kumjikelo mhlawumbi 🙂
Ngokunyanisekileyo ndicinga ukuba esi sihloko esikhulu ngokwaneleyo kwikholamu ngokukodwa ukuba ungugqirha kuyo.